Tayo hubin lagu sameynayo dawada iyo raashinka soo gela Muqdisho | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada Tayo hubin lagu sameynayo dawada iyo raashinka soo gela Muqdisho
Tayo hubin lagu sameynayo dawada iyo raashinka soo gela Muqdisho
Masuuliyiinta dhinaca caafimaadka ee dawladda Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay ku dhawaad 15 tan oo isugu jiray dawo iyo raashin dhacay kuwaasoo la doonayay in si qarsoodi ah loogu qeybiyo barakacayaasha ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Madaxa waaxda caafimaadka iyo nadaafadda dawladda hoose ee Muqdisho, Dr. Cabdullaahi Nuune ayaa sheegay inay soo qabteen dawada iyo raashinka, ka dib markii ay baaris guud ku sameeyeen bakhaaro ay ku keydsanayeen oo ku yaalla magaalladda.
Tayo hubin iyo xaqiijin dheer ka dib dawada iyo raashinkaasi, dhacay ayaa dhamaantood waxaa lagu gubay dulleedka degmadda Kaaraan ee Muqdisho si looga hortago mashaakilaadka caafimaad darro ee bulshada ay u keeni karaan.
“Waxa kani ma ahan samafal iyo saaciddaad bulsho ee waa qorshe ballaaran oo lagu ciribtirayo dadkeena, horey waa loogu digay sidaas darted; cid kasta oo lagu helo qeybinta iyo ka ganacsiga waxyaabo dhacay sharciga ayaa lala tiigsan doonaa.” Sidaasi waxaa warfidiyeenadda u sheegay Dr. Cabdullaahi Nuune.
Dr. Nuune ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dabaggel lagu hayo shaqsiyaad iyo hey’addo lagu tuhmayo in waddanka ay kusoo daabullaan waxyaabo badan oo dhacsan.
Dhinaca kale bayaan kasoo baxay xaafiiska duqa magaalladda Muqdisho ayaa lagu shaaciyay qorsheyaal markasta lagu hubinayo dawooyinka iyo raashinka ay soo dejiyaan hey’addaha gargaarka Qaramadda Midoobay iyo kuwa caalamiga ah ee ka hawlgala gudaha Soomaaliya.
Qorshehaasi la soo rogayo waxaa ka mid noqon doona xarig iyo ganaax adag oo la dul dhigi doono shaqallaaha samafalka ee lagu qabto waxyaabo dhacsan, waxaana arrintaasi ay wax weyn ka badeli doontaa bad qabidda dawada, cunnooyinka iyo waxyaabaha kale ee nolosha bulshada muhiimka u ah.
Previous articleSchulman Rogers: waa been abbuur eedda Qaramadda Midoobay
Next articleMadaxweyne Galeyr oo ku baaqey in la aqoonsado Khaatumo